China Trolley Type Shot Blasting Machine mpanamboatra & mpamatsy - Puhua
an-trano > Products > Fitaovana fanapoahana basy > Trolley Type Shot vary main'ny rivotra
1.Fampidirana milina fanapoahana tifitra trolley
Shotblasters dia manangana renirano metaly fitetezana haingam-pandeha. Ny fananganana shotblaster dia mamela hamorona sy handamina ny lalana mikoriana. Ny famerenana ny tifitra efa niasa dia mitohy hatrany amin'ny tsingerina mihidy izay mitifitra tifitra amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fitaterana visy amin'ny ascenseur ao anaty mpampisaraka, esorina ny evator ary avy eo ao amin'ny hopper.
2.Famaritana ny milina fanapoahana karazana trolley:
Karazana Q69 (namboarina)
Ny sakan'ny fanadiovana mahomby (mm) 800-4000
Ny haben'ny feed-in (mm) 1000 * 400 --- 4200 * 400
Ny halavan'ny asa fanadiovana (mm) 1200-12000
Ny hafainganan'ny mpampita kodiarana (m / min) 0,5-4
Ny hatevin'ny fanamafisam-peo (mm) 3-100 --- 4.4-100
Ny fizarana vy vy (mm) 800 * 300 --- 4000 * 300
Ny habetsaky ny fipoahana (kg / min) 4 * 180 --- 8 * 360
Ny habetsahana (kg) voahidy voalohany 4000 --- 11000
Borosy manitsy ny haavony (mm) 200 --- 900
Fahaizan'ny rivotra (m³ / h) 22000 --- 38000
Haben'ny ivelany (mm) 25014 * 4500 * 9015
Herinaratra tanteraka (ankoatry ny fanadiovana vovoka) (kw) 90 --- 293.6
Azontsika atao ny mamolavola sy manamboatra karazana milina fitifirana karazana trolley tsy misy fenitra mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny antsipiriany momba ny sanganasa, ny lanjany ary ny famokarany.
3.Détail an'ny milina fanapoahana karazana trolley:
4. Fanamarinana ny milina fanapoizinana karazana trolley:
Ny orinasanay dia nandalo mari-pahaizana CE, ISO. Vokatry ny milina famafana trolley type shot shot »:, serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny vidin'ny fifaninanana, nahazo tambajotram-barotra eran-tany nahatratra firenena 90 mihoatra ny kontinanta dimy izahay.
2. Ahoana ny fametrahana ny milina fanapoahana trolley karazana trolley :?
4. Ahoana ny fifehezana ny kalitaon'ny milina fanapoizinana karazana trolley :?
5. Inona no ampahany miasa afaka manadio amin'ny Trolley Type Shot Blasting Machine :?
Raha liana amin'ny milina fanapoahana tifitra Trolley Type Shot ianao :, tongasoa ianao hifandray aminay.
Hot Tags: Trolley type shot machine Santionany maimaim-poana, marika, vitaina any Chine, vidiny, lisitry ny vidiny, teny nindramina, CE, Warranty herintaona